Paikady SEO: Ahoana no ahazoanao ny laharan'ny orinasanao amin'ny fikarohana organika amin'ny 2022? | Martech Zone
Alatsinainy Martsa 28, 2022 Alatsinainy Martsa 28, 2022 Douglas Karr
Miara-miasa amin'ny mpanjifa izahay amin'izao fotoana izao izay manana orinasa vaovao, marika vaovao, sehatra vaovao, ary tranokala e-varotra vaovao amin'ny indostria tena mifaninana. Raha azonao ny fomba fiasan'ny mpanjifa sy ny milina fikarohana, dia azonao fa tsy tendrombohitra mora ny hiakarana. Ny marika sy ny sehatra manana tantara lava momba ny fahefana amin'ny teny fototra sasany dia manana fotoana mora kokoa amin'ny fitazonana ary na dia mampitombo ny laharan'ny organika aza.
Fahatakarana SEO amin'ny 2022
Iray amin'ireo resadresaka lehibe nataoko tamin'ny orinasa aho rehefa mamaritra ny fanatsarana ny milina fikarohana (SEO) amin'izao fotoana izao dia tena niova tokoa ny indostria. Ny tanjon'ny valim-pikarohana tsirairay dia ny hanome lisitr'ireo loharano ao amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana (SERP) izay ho tsara indrindra ho an'ny mpampiasa milina fikarohana.
Taona maro lasa izay, tsotra ny algorithm. Ny valin'ny fikarohana dia nifototra tamin'ny rohy… angony ny rohy betsaka indrindra ho an'ny fonenanao na ny pejinao ary ny pejinao dia manana laharana tsara. Mazava ho azy, rehefa nandeha ny fotoana, ny indostria dia nilalao ity rafitra ity. Ny orinasa SEO sasany aza dia nanamboatra rohy toeram-piompiana mba hampitomboana amin'ny fomba artifisialy ny fahitan'ny milina fikarohana an'ireo mpanjifany mandoa vola.
Ny motera fikarohana dia tsy maintsy nampifanaraka… nanana tranokala sy pejy misy laharana tsy misy ifandraisany amin'ny mpampiasa milina fikarohana izy ireo. ny pejy tsara indrindra Tsy laharan'ny orinasa, fa ireo orinasa manana paosy lalina indrindra na ireo paik'ady backlinking mandroso indrindra. Amin'ny teny hafa, ny kalitaon'ny valin'ny motera fikarohana dia nihena… haingana.
Namaly ny algorithm amin'ny motera fikarohana ary nisy andianà fanovana nanozongozona ny indostria ho amin'ny fotony. Tamin'izany fotoana izany dia nanoro hevitra ny mpanjifako aho mba hiala amin'ireo tetika ireo. Ny orinasa iray izay nandeha ampahibemaso aza dia nanakarama ahy hanao fanamarinana ara-tsiansa momba ny backlinks novokarina tamin'ny alàlan'ny fandaharan'asan'ny consultant SEO. Tao anatin'ny herinandro dia afaka nanara-dia aho fambolena rohy fa ny mpanolo-tsaina dia namokatra (mifanohitra amin'ny fepetran'ny serivisy amin'ny milina fikarohana) ary mametraka ny sehatra ho atahorana hilevina amin'ny fikarohana, loharano voalohany amin'ny fifamoivoizana. Noroahina ireo mpanolo-tsaina, izahay nandà ny rohy, ary namonjy ny orinasa tsy ho tratry ny olana izahay.
Hafahafa amiko ny hoe ny masoivoho SEO rehetra dia mino fa marani-tsaina kokoa noho ireo siantifika an-jatony sy injeniera manana kalitao miasa manontolo andro ao amin'ny Google (na milina fikarohana hafa) izy ireo. Ity ny fototry ny algorithm amin'ny filaharana organika an'ny Google:
Ny pejy ambony indrindra amin'ny valin'ny fikarohana Google dia nahazo laharana tao amin'ny maha-loharanom-baovao tsara indrindra ho an'ny mpampiasa motera fikarohana, fa tsy amin'ny filalaovana algorithm mifandray miverina.
Ny laharam-pahamehana Google ambony indrindra amin'ny 2022
Ny toerana ahafahan'ireo mpanolo-tsaina SEO taona maro lasa izay mifantoka amin'ny tranokala miaraka amin'ny lafiny ara-teknika amin'ny tranokala sy ivelan'ny tranokala miaraka amin'ny backlinks, ny fahaiza-manao ankehitriny dia mitaky fahatakarana feno momba ny mpampiasa motera fikarohana anao sy ny user experience izay omenao azy ireo rehefa misafidy ny tranokalanao amin'ny valin'ny motera fikarohana izy ireo. Ity infografika ity avy amin'ny Famoronana tranokala mena manao asa mahafinaritra amin'ny fampidirana ny anton-javatra ambony indrindra amin'ny alalan'ny Search Engine Journal amin'ireto anton-javatra lehibe ireto:
Famoahana votoaty avo lenta – Rehefa miasa amin'ny fanombanana sy fampivelarana a tranomboky atiny ho an'ny cleints anay, miasa amin'ny famokarana votoaty tsara indrindra izahay raha ampitahaina amin'ireo tranonkala mifaninana. Midika izany fa manao fikarohana be dia be izahay mba hamokatra pejy feno sy vita tsara izay manome ny mpitsidika ny zavatra rehetra ilainy - ao anatin'izany ny atiny mifampiresaka, soratra, feo, horonan-tsary, ary votoaty hita maso.
Ataovy ny tranokalanao ho Mobile-First – Raha mandalina lalindalina kokoa ny analysenao ianao dia ho hitanao fa matetika ny mpampiasa finday no loharano voalohany amin'ny fifamoivoizana amin'ny milina fikarohana organika. Eo anoloan'ny biraoko miasa isan'andro aho… fa na dia izaho aza dia mpampiasa motera fikarohana finday mavitrika rehefa any an-tanàna, mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra, na mipetraka fotsiny ny kafe maraina eo am-pandriana.
Hatsarao ny traikefan'ny mpampiasa anao – Betsaka loatra ny orinasa maniry a Refresh amin'ny tranokalan'izy ireo tsy misy fikarohana sahaza raha mila izany izy ireo na tsia. Ny sasany amin'ireo tranonkala manana laharana tsara indrindra dia manana firafitry ny pejy tsotra, singa fitetezana mahazatra ary lamina fototra. Ny traikefa hafa dia tsy voatery ho traikefa tsara kokoa… tandremo ny fironana amin'ny famolavolana sy ny filan'ny mpampiasa anao.
Architecture tranokala - Ny pejin-tranonkala fototra ankehitriny dia manana singa lavitra kokoa izay hitan'ny milina fikarohana noho ny am-polony taona lasa izay. Nandroso ny HTML ary manana singa fototra sy faharoa, karazana lahatsoratra, singa fitetezana, sns. Na dia mety manana laharana tsara aza ny pejin-tranonkala tsotra maty iray, ny maritrano tranokala dia iray amin'ireo zavatra mora indrindra amboarina amin'ny tranokala iray. Ampitahaiko amin'ny fanodinkodinana ny karipetra mena… maninona raha manao izany?
Vitaly Core Web - Vitaly Core Web dia tsipika fototra manan-danja amin'ny tontolo tena izy, metrika mifototra amin'ny mpampiasa izay mamaritra ny lafiny manan-danja amin'ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny tranokala iray. Na dia mety manana laharana tsara amin'ny milina fikarohana aza ny votoaty lehibe, ny votoaty lehibe mihoatra ny zavatra andrasana amin'ny metrikan'ny Core Web Vitals dia ho sarotra ny handondona ny vokatra ambony indrindra.
Tranonkala azo antoka – Ny ankamaroan'ny tranonkala dia mifampiresaka, midika izany fa mandefa angona ianao ary mahazo votoaty avy amin'izy ireo… toy ny taratasy fisoratana anarana tsotra. Ny tranokala azo antoka dia aseho amin'ny a HTTPS fifandraisana amin'ny sosona socket azo antoka azo antoka (SSL) taratasy fanamarinana izay mampiseho fa ny angon-drakitra rehetra alefa eo amin'ny mpitsidika anao sy ny tranokala dia voarakotra mba tsy ho azon'ny mpijirika sy fitaovana hafa mpitsikilo tambajotra. ny tranonkala azo antoka dia tsy maintsy amin'izao fotoana izao, tsy misy maningana.
Amboary ny hafainganam-pandehan'ny pejy - Ny rafitra fitantanana votoaty maoderina dia sehatra mifototra amin'ny angona izay mijery, maka ary manolotra ny atiny amin'ny mpampiasa. Misy taonina ny lafin-javatra misy fiatraikany amin'ny hafainganan'ny pejy - izay rehetra azo atao tsara. Ireo mpampiasa mitsidika pejin-tranonkala haingana dia mazàna tsy mitsambikina sy mivoaka… noho izany ny milina fikarohana dia mijery akaiky ny hafainganan'ny pejy (Ny Core Web Vitals dia mifantoka kely amin'ny zava-bitan'ny tranokalanao).
Fanatsarana ny pejy – Ny fomba fandaminana sy fanamboarana ary fanolorana ny pejinao ho an'ny motera fikarohana dia manampy ny motera fikarohana amin'ny fahatakarana ny votoatiny sy ny teny fototra tokony hanondroana azy. Mety ho tafiditra ao anatin'izany ny lohateninao, ny lohateninao, ny voambolana mipetaka, ny atiny manantitrantitra, ny angona meta, ny sombintsombiny manankarena, sns.
Metadata – Meta deta dia fampahalalana tsy hitan'ny mpampiasa hita maso amin'ny pejin-tranonkala iray saingy voarafitra amin'ny fomba mora lanin'ny motera fikarohana. Ny ankamaroan'ny sehatra fitantanana votoaty sy sehatra e-varotra dia manana saha meta data azo atao izay tokony hararaotinao mba hahazoana tsaratsara kokoa ny votoatinao.
Schema - Ny Schema dia fomba iray handrafetana sy hanehoana ny angona ao anatin'ny tranokalanao izay azon'ny milina fikarohana mora lanin'ny motera. Ny pejin'ny vokatra amin'ny pejin'ny e-varotra, ohatra, dia afaka manana fampahafantarana momba ny vidiny, famaritana, fanisan'ny fanisana ary fampahalalana hafa izay hasehon'ny milina fikarohana amin'ny fomba tena tsara. snippets manankarena ao amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana.
Fifandraisana anaty - Ny ambaratongan'ny tranokalanao sy ny fitetezanao dia maneho ny maha-zava-dehibe ny atiny amin'ny tranokalanao. Tokony hotsaraina ho an'ny mpampiasa anao izy ireo ary hampiseho amin'ny milina fikarohana izay pejy tena manakiana ny atiny sy ny traikefan'ny mpampiasa anao.
Backlinks mifandraika sy manam-pahefana - Ny rohy mankany amin'ny tranokalanao avy amin'ny tranokala ivelany dia mbola manan-danja amin'ny filaharana, saingy tokony halamina tsara raha te hanafaingana ny laharanao ianao. Ny fanaparitahana bilaogera, ohatra, dia afaka manolotra vohikala mifandraika amin'ny indostrianao izay manana laharana tsara miaraka amin'ny atiny izay mampiditra rohy mankany amin'ny pejinao na sehatra misy anao. Na izany aza, tokony ho azo amin'ny votoaty lehibe izy io… tsy atosiky ny spamming, ny varotra, na ny tetika mampifandray karama. Ny fomba tsara amin'ny famokarana backlinks tena manan-danja sy manan-kery dia ny famokarana lehibe Fantsona YouTube namboarina. Ny fomba tsara ahazoana rohy dia ny mamokatra sy mizara infografika mahafinaritra… tahaka ny nataon'ny Red Website Design etsy ambany.
Fikarohana eo an-toerana - Raha solontenan'ny serivisy eo an-toerana ny tranokalanao, mampiditra tondro eo an-toerana toy ny kaody faritra, adiresy, mari-pamantarana, anaran-tanàna, sns. ho an'ny milina fikarohana mba hanondroana tsara kokoa ny votoatinao ho an'ny fikarohana eo an-toerana. Ary koa, ny orinasanao dia tokony hampiditra Google Business sy lahatahiry azo itokisana hafa. Ny Google Business dia hiantoka ny fahitana amin'ny sari-tany mifandraika (fantatra ihany koa amin'ny hoe fonosana sarintany), ny lahatahiry hafa dia hanamarina ny fahamarinan'ny orinasanao eo an-toerana.
Oay… somary kely izany. Ary manome fahatakarana kely momba ny antony tsy ampy fotsiny ny consultant momba ny teknolojia fikarohana madio. Ny laharan'ny fikarohana organika ankehitriny dia mitaky fifandanjana amin'ny tetikady votoaty, teknolojia, mpandalina, mpivarotra nomerika, manam-pahaizana manokana momba ny fifandraisana amin'ny besinimaro, mpanao mari-trano… sy izay rehetra eo anelanelany. Tsy lazaina intsony ny fomba hifaneraseranao amin'ny mpitsidika rahoviana tonga izy ireo - avy amin'ny fisamborana angon-drakitra, fandrefesana, fifandraisana ara-barotra, dia nomerika, sns.
Tags: ny mpitoraka bilaogyvitals core webGoogleorinasa googletoe-javatra laharana googleny httpsSary torohayanatiny mifandrayrohylahatahiry eo an-toeranafikarohana eo an-toeranaMetadatafinday-voalohanyfanatsarana eo amin'ny pejylaharana biolojikafikarohana biolojikafanentananapage speedfanatsarana haingana ny pejylafin-javatrasnippets manankarenatetikaschema.tranokala azo antokaSEOseo infographicsite architectureSSLuser experience
Ny lasa, ankehitriny ary ny hoavin'ny tontolon'ny marketing influencer